Elgiva Bwire oo Xabsi Daa'in Lagu Xukumay
Maxkamad ku taalla dalka Kenya ayaa maanta xabsi daa’in ku xukuntay Elgiva Bwire Oliacha oo ah nin Kenyan ah oo qirtay inuu ka mid yahay Al-shabaab kana danbeeyay mid ka mid ah laba qarax oo toddobaadkan ka dhacay Nairobi.
Oliacha ayaa maxkamada horteeda ka qirtay lugtii uu ku lahaa weerar qarax oo lagu bartilmaameedsaday boosteejo basaska laga raaco oo ku taalla Nairobi. Qaraxaasi waxaa ku dhintay hal qof, 20-kalena ay ku dhaawacmeen.
Boliiska ayaa ninkan soo qabtay toddobaadkan, iyagoo ku qabtay hub iskugu jira 13 bambo gacmeed, laba qoryaha boobayaasha ah iyo afar barstooladood
Dhinaca kale, hoggaamiyaha Kooxda Al-Shabaab ayaa taageerrayaashiisa ugu baaqay inay qarax ka gesytaan gudadaha dalka Kenya. Sheekh Mukhtar Roobow ayaa sheegay in banbaanooyin gacanta laga tuuro aysan ku filnayn dalka Kenya, isagoo taageerayaashiisa ku booriyay inay geystaan waxaa uu ugu yeedhay weerar weyn oo xanuun badan.